Apple Bhadhara pawebhu inotanga kuvhurwa pane akasiyana masosi | IPhone nhau
Apple Bhadhara pawebhu inotanga kuvhurwa pane akasiyana masosi nekumisikidzwa kweIOS 10
iOS 10 inosanganisira kutsigira Apple Pay pawebhu, Kubvumira vashandisi kutenga pamawebhusaiti ayo anoshandisa Apple kubhadhara masevhisi uye neTouch ID yekutenderedzwa kweminwe. Zvino izvo iOS 10 yave kuwanikwa kune veruzhinji, mamwe mawebhusaiti akatanga kuburitsa rutsigiro rweApple Pay zvakananga muwebhu basa.
Nguva Inc. nhasi yazivisa kuti vatengi vayo vava kukwanisa kushandisa Apple Kubhadhara kutenga kunyoreswa kumutsara wayo wemagazini, kusanganisira Sports Illustrated, People, Entertainment Weekly, uye Real Simple.
Vhiki rapfuura, mutengesi wepaInternet Wayfair akazivisa rutsigiro rweApple Pay pawebhu, achipa vatengi sarudzo yekubhadhara pamidziyo yekumba uye zvigadzirwa zvekubhadhara kuburikidza neApple. Apple, hongu, iri kugamuchira Apple Pay pawebhusaiti yavo futi.
Apple yekubhadhara masevhisi akaverengerwa muBig Commerce, Shopify, Stripe, uye squarespace. Vazivisa iyo tsigiro yeApple Pay pawebhu, ichipa vatengesi vadiki nzira iri nyore yekutambira Apple kubhadhara kubhadhara kutenga.
Mumavhiki anotevera, isu tinofanirwa kuona Apple Pay ichitanga kuburitswa kune mamwe mawebhusaiti, ichipa vatengi imwe nzira kumabasa ekubhadhara aripo, akadai sePayPal. NaApple Bhadhara, kutenga kunogona kuitwa nekubata kamwe chete, uye hapana chikonzero chekupinza kiredhiti kadhi kana ruzivo rwekutumira. Apple Pay zvakare yakachengeteka kwazvo, ichichengeta manhamba emakadhi uye rumwe ruzivo rwemunhu kubva mumaoko evatengesi.
Kana macOS Sierra yaburitswa kuruzhinji Chipiri chinotevera, Apple Bhadhara pawebhu ichave ichiwanikwa paMac. Sezvo neApple Pay pane iyo iPhone, kutenga kuchasimbiswa kuburikidza nekubatana kune iyo iPhone 6 kana gare gare, pamwe neApple Watch.
Sekureva kwaApple, macOS Sierra yeApple Pay pawebhu ficha ichave inowanikwa kune vese vatengi vane Mac iyo inokwanisa kumhanyisa iyo Sierra yekushandisa system.
Pane nharembozha, Apple Bhadhara pawebhu inowanikwa pa iPhone 6 uye gare gare, iPad Pro, iPad Air 2, uye iPad Mini 3.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Bhadhara pawebhu inotanga kuvhurwa pane akasiyana masosi nekumisikidzwa kweIOS 10
Spotify inozivisa kuuya kwevashandisi vemamiriyoni makumi mana emamiriyoni
Render rekuti mamwe maAirPod angatarise sei mune rakasviba nhema